Ukujwayela ngemithetho yokuphepha komlilo (PB) ingenye yezakhi eziyinhloko zesiko lokuphepha elivamile. Imfundo yabantu emkhakheni we-PB ivumela umuntu ukuba anethemba ukuthi inani lemililo elibangelwa isimo sengqondo esingahlelekile sabantu abathile ku-PB ilawula, ukuphathwa ngokungenandaba komlilo, ukunganakwa kwemithetho yokufaka, ukusetshenziswa kwemishini kagesi kanye nemishini yasendlini kuyokwehla.
Inhloso nomsebenzi wokuqeqesha emkhakheni wokuphepha komlilo
Ukuzijwayeza kwabasebenzi kanye nezinhloko zezikhungo ezihlukahlukene ne-BOP kwenziwa ngenhloso yokwandisa izinga lomkhiqizo womlilo, okuzoba nomphumela omuhle ekuqiniseni isimo esimweni seBOP kokubili emsebenzini nasemakhaya.
Imisebenzi exazulula lolu hlobo lokuqeqesha ibonakala ekufisweni:
Ukunikeza abantu ngangokunokwenzeka ulwazi emkhakheni wePB;
Amakhono namakhono amakhono okusebenza lapho kwenzeka ukushisa okungalawuliwe;
Thuthukisa amakhono namakhono azosiza ekusindiseni izimpilo, impilo kanye nempahla uma kwenzeka umlilo.
Ukulwa Komlilo: Ingqungquthela
Ukuqeqeshwa komlilo (kanye nomlilo kanye nobuchwepheshe obuphansi) kuyindlela yokukhulumisana nezidingo ku-PBs kubasebenzi bezikhungo ezihlukahlukene, okubenza banikeze ithuba lokutadisha ingozi yomlilo ngezinqubo zezobuchwepheshe emsebenzini, bafunde ngezindlela zokuvikelwa komlilo kanye nezenzo ezidingekayo ezidingekayo uma kwenzeka umlilo ongalawuleki.
Imfundo yokuqothula umlilo kufanele isenziwe:
Ngabasebenzi abasanda kuqashwa, kungakhathaliseki ukuthi bafundiswa yini, basebenze isipiliyoni emsebenzini noma emsebenzini;
Ngabasebenzi ngezikhathi zesikhashana;
Ngabantu abahamba ngebhizinisi;
Ngabaqeqeshi abasebenza emsebenzini.
Umhlangano omkhulu wokulwa nomlilo endaweni yomsebenzi kufanele uqhutshwe:
Nabo bonke abasebenzi abasha;
Ngabasebenzi badluliselwe kwesinye isiqephu sendikimba efanayo;
Ngabasebenzi abaqala amasha, imisebenzi engazijwayele;
Ngabasebenzi abasebenza okwesikhashana;
Ngabakhi abenza ukwakhiwa nokufakwa kusebenza endaweni yesikhungo.
Umuntu onesibopho sokuthola i-BOP enyunithi angafundiswa.
Lolu hlobo lokuxoxisana luqhutshwa ngesisekelo somuntu ngabanye ngezenzo ezibonakalayo zokuvimbela nokucima umlilo. Imfundo ingaba iqembu, uma iqembu labantu likhonza uhlobo olufanayo lwemishini endaweni eyodwa yokukhiqiza.
Imfundo ephindaphindiwe yokushayela umlilo
Imfundo enjalo iqhutshwa phakathi kwabo bonke abantu abathintekayo emsebenzini wenhlangano, ngaphandle kokungafani, kungakhathaliseki ukuthi yiziphi iziqu, imfundo, ubude benkonzo, uhlobo lomsebenzi okwenziwe. Ukuxoxwa okuphindaphindiwe kuqhutshwa njalo ezinyangeni eziyisithupha. Inqubo yokuhlola, ulwazi lwezimiso nemiyalelo ye-BOP ihlolwe.
Amaqembu omlilo: angaphunyeki
Isidingo sokwaziswa okunjalo kuphakama:
Lapho kutholakala amasha noma izinguquko ezenziwe emithethweni endala nemigomo ye-PB;
Uma kunezinguquko kwinqubo yokukhiqiza kwezobuchwepheshe , uma kushintshwa noma ukuvuselelwa kwemishini, imithombo yomthombo nezinye izimo ezithinta isimo sokulwa nomlilo wokukhiqiza;
Lapho kube khona ukwephulwa kwabasebenzi bezimfuneko ze-PB, ngenxa yalokho umlilo ongavuka noma wavuka;
Uma ulwazi litholwa ngemililo, izingozi noma izigameko ezakhiweni ezifanayo;
Lapho iqiniso lezinyathelo zabasebenzi kanye nezidingo ze-PB zisungulwa.
Okuzofaka phakathi kokuqukethwe kwalesi sihloko, ngezinga elingakanani, kunqunywe kuye ngezizathu eziholela ekudingeni lokho.
Kuyini ubuncane bomlilo-lobuchwepheshe
Ubuncane bokusebenza komlilo kuyinkqubo yokwazisa abaphathi kanye nabasebenzi bezakhiwo ngezinyathelo ze-PB ukwandisa izinga lomlilo phakathi kwabantu abasebenza, ukuthola amakhono namasu okuqeda umlilo, ukusindisa izimpilo, impahla, impilo.
Lapho uhlela ukuqeqeshwa, kugcizelelwe kufanele kufakwe kulokho okufundisiwe. Ngakho-ke, inani elincane lomlilo labaphathi kanye nabantu abaphethe i-PB kumele linikele ngokukhethekile umthwalo wabo wemfanelo wokulandela imithetho nemigomo ye-PB, ingozi yomlilo yezikhungo ezithile.
Izinga eliphansi lomlilo labasebenzi abanokuzikhethela okuhlukile kumele ligxile ekuqondeni kochwepheshe kanye nento ewusizo, lapho amakhono okusebenzisa izindlela zokuqeda umlilo eziqakathekileko ahlolwe noma atholakale , imithetho yokuziphatha uma kwenzeka umlilo kulesimo esithile ucwaningwa, izenzo zokukhishwa esikhungweni ngenxa yokushisa . Akufanele kube khona ubunzima ekuboniseni izinto.
Ukuhlola ulwazi lokunciphisa umlilo-lobuchwepheshe ukulawula ukulungiswa kwezinyathelo ezithathwe uma kwenzeka ukuqhuma.
Inqubo yokuqeqesha okungenani ku-PB yenziwa ngokuhlukaniswa ekukhiqizeni ngokususelwa kwizikhungo zemfundo zemfundo yomlilo-ezobuchwepheshe, izikhungo zemfundo nezindlela zokufundisa, ukuhlukana kwezindawo zoMnyango Wezindlela Eziphuthumayo zaseRussia nezinye izinhlangano zomthetho nabantu abathile abanelayisensi yokuqhuba lolu qeqesho.
Othisha, othisha, izikhulu eziqhuba ukuqeqeshwa ngaphakathi kohlaka lwazo lwezinyathelo ze-PB kumele zenzeke ngaleyo ndlela ngesisekelo sezikhungo zemfundo ezikhethekile futhi zithole isitifiketi esifanele esiqinisekisa ulwazi lwabo.
Ukuqeqeshwa komlilo: imvamisa yokuqhuba
Umuntu okhethiwe futhi wakhethwe yinhloko yenkampani unelungelo lokufundisa ubuncane bomlilo-lobuchwepheshe. I-periodicity yokuqeqeshwa kwabasebenzi kanye nabaphathi bezinhlangano ezingabheki nezinto zokuqothula ekukhiqizweni eminyakeni emithathu. Uma ibhizinisi lihlotshaniswa nokuqhuma noma ukulimala komlilo, khona-ke ukuqeqeshwa okuyisisekelo somlilo kufanele kuqhutshwe kanye ngonyaka, okungenani. Ulwazi olutholakala kulezi zifundo luzosiza izisebenzi ezimo eziphuthumayo ukuvimbela umlilo noma ukuqeda imbangela yayo.
Ukuhlolwa kolwazi: kanjani nokuthi ubani owenziwe
Ikomidi elenziwe ngokukhethekile lihlola ubuncane bomlilo kanye nobuchwepheshe. I-oda lomphathi wezinto uhlela futhi uvume ukwakheka kwekhomishana, okumele ifake okungenani abantu abathathu. Kungabandakanya imenenja, ochwepheshe bekhanda kanye nabantu abaphethe i-PB esikhungweni, futhi bangamema abameli beziphathimandla zokuphepha komlilo.
Ulwazi lobuncane bomlilo-lobuchwepheshe kufanele luhlolwe ngokuhambisana nesimiso esivumelanisiwe ngaphambili yinhloko. Abantu okufanele bahlolwe kumele bazijwayele ngaphambili. Kufanele kufaka phakathi ukuqinisekiswa kolwazi lwamaqiniso nolwazi.
Ukulawula imibuzo yokuhlola ulwazi phakathi kwabasebenzi beziphathimandla zikahulumeni, ngokucabangela imisebenzi ethile yokukhiqiza, ihlanganiswa yizinsizakalo neminyango. Izinhloko zezinye izikhungo nezinhlangano noma abantu abaphethe i-PB kule sikhungo bangazimela ngokuzimela imibuzo yokuqapha. Kodwa-ke kudingeka badinganiswe nezinhlangano zomhlaba zokuqondiswa komlilo wombuso. Futhi, abaphathi bamabhizinisi bangazimela ngokuzimela ukufunda izifundo bese benza uhlu lwabalaleli-abasebenzi.
Ukuqinisekisa kungenziwa ngokusebenzisa ukuhlolwa noma isofthiwe.
Imiphumela kanye neyodwa insimu yomlilo-ezobuchwepheshe ibhaliswe ku-protocol, eqinisekisiwe ngusihlalo namalungu ekhomishana.
Abantu abangadluli ukuhlolwa kolwazi ngenxa yokulungiselela okungalungile, kumele benze isheke lesibili nokuqeqeshwa ngenyanga ezayo.
Abasebenzi abaye baphumelela ngempumelelo ubuncane bomlilo-lobuchwepheshe bathola isitifiketi esisayinwe ngusihlalo namalungu ekhomishana, ngesitembu sesikhungo esakhishwa isitifiketi, nosuku lokuhlolwa kwamabhuku, okukhombisa ukuthi yiziphi izimfanelo ezitholiwe.
Izinhlelo ezikhethekile zokuqeqeshwa kokuphepha komlilo
Ukuthuthukisa izinhlelo zokuqeqesha kungaba abantu bezomthetho nezomzimba. Izinhlelo zokuqeqesha izinhlangano eziphezulu ze-federal zivunyiwe yizinhloko zezinhlangano ngemuva kokuvunyelwene ngokuhambisana nenqubo esungulwe nomhloli omkhulu wombuso we-Russian Federation ye-BOP.
Izinhlelo zokuqeqesha ezinye izinto zivunyiwe yiziphathimandla zokuqondisa umlilo emzimbeni, lapho isikhungo singaphansi kwendawo, kucabangela zonke izincomo zendlela.
Ubani odingekayo ukuba aqeqeshe ku-MTC
Izifundo eziphoqelekile kufanele zibe:
Kubaphathi bezindawo ezihlobene nokukhiqizwa kokuqhuma.
Kubasebenzi abaphethe i-PB kumasayithi ahlukahlukene.
Othisha abasebenza ezikoleni zangaphambi kwesikole nezikole.
Abasebenzi benza ukuvikelwa kwezingxenye ze-clock-clock.
Kuzakhamuzi ezibandakanyeka emisebenzini yokuvimbela imililo.
Kubasebenzi abavame ukuhileleka emsebenzini wokuqothula nomlilo.
Ukuqeqeshwa komlilo kanye nobuchwepheshe obufanele okubhekiswe ekuhambeni kwayo, kusenza sibe nethemba lokuthi inani lemililo endaweni yomsebenzi nasekhaya ngenxa yezimo zengqondo ezinganaki zomlilo zizokwehla ngonyaka.
Fiction zomlando: kaHitler nesibongo sangempela
Udweba kanjani le Joker kusukela "Ukuzibulala Squad": izincomo main futhi izinyathelo